Nsọpụrụ ụbọchị nke ụbọchị: otu esi ebi ndụ n'oge awa nke ụbọchị | Ilblogdellafede
Ezi ofufe nke ụbọchị: otu esi adị ndụ elekere mbụ nke ụbọchị
Oge mbu nke ubochi
1. Inye obi gi n’ile Chineke: Tughari uche na idi nma nke Chineke bu onye choputara gi site na ihe obula, na ebum n’uche na ihuru ya n’anya, jeere ya ozi ma rie ya uto. Kwa ụtụtụ mgbe ị na-eteta, mgbe ị na-emepe anya gị n’anyanwụ, ọ dịka ihe e kere eke; Chineke kwughachiri gị: Bilie, dịrị ndụ, hụ m n’anya. Okwesighi ka nkpuru obi nlezianya jiri ndu hu ndu? N'ịmara na Chineke kere ya maka ya, ọ gaghị ekwu ozugbo: Onyenwe anyị, a na m enye gị obi m? - you na-a mara mma omume?
2. Were ụbọchị ahụ nye Chineke: Ohu site n ’ọlụ nke ndị dị ndụ? Shouldnye kwesịrị ka nwatakịrị? I bụ ohu Chineke; Ọ na ejigide gị site na mkpụrụ nke ụwa, na-enye gị ụwa maka obibi, na-ekwe gị nkwa inweta Paradaịs dịka ụgwọ ọrụ, ọ bụrụhaala na ị na-ejere ya ozi n'ikwesị ntụkwasị obi ma na-emere ya ihe niile. Ya mere, si: Ihe nile diri gi, Chinekem, gi nwa Chineke, you gaghi anwa ime ihe di Nna gi uto? Mara ka esi ekwu: Onyenweanyị, a na m enye gị ụbọchị m, jiri ya niile maka gị!
3. Ekpere ụtụtụ. Okike nile na-eto Chukwu, n’ututu, n’asụsụ ya: nnụnụ, okooko osisi, ikuku dị nro nke na-afụ: ọ bụ ukwe otuto nke ụwa dum, nke ekele nye Onye Okike! Naanị gị bụ oyi, nwere ọtụtụ ọrụ nke obi ekele, yana ọtụtụ ihe egwu ndị gbara gị gburugburu, yana ọtụtụ mkpa nke ahụ na mkpụrụ obi, nke naanị Chineke nwere ike inye. Ọ bụrụ na ikpeghị ekpere. Chineke na-ahapụrụ gị, mgbe ahụ, gịnị ga-eme gị?
OMUME. - Banye n'omume nke inye obi gị Chineke n'ụtụtụ; n'ụbọchị, kwughachi: Ihe niile dịịrị gị, Chineke m
← Na post gara aga Gara aga post:Na-atụgharị uche taa n'ụzọ ọ bụla nke nwere nnukwu ebumnuche ịtụkwasị obi na Jizọs
Ọzọ Post → Post ozo:Gịnị bụ mmehie ịkwa iko?